Global Voices teny Malagasy » Fitsidihana Virtoaly Ao Amin’ny Haran-dranomasin’i Papua Andrefana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Jona 2016 5:04 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Indonezia, Mediam-bahoaka, Siansa, Tontolo_iainana, Tsidika
Harana madio mangarahara amin'ny vatohara mirantsandrantsana misy zana-trondro-fanihy ao amin'ny farihin-dranomasina kelin'i Wayag, Raja Ampat. Sary: Sterling Zumbrunn. Natolotry ny Conservation International
Iray amin'ireo foibe manan-karena indrindra amin'ny harena voajanahary an-dranomasina eto amin'izao tontolo izao ny saikanosin'i Loham-Borona [Bird’s Head] ao Papua Andrefana. Afaka mijery ireo harena anaty ranon'i Bird's Head isika izao amin'ny alàlan'ny sarimihetsika mampiseho ny zavamisy virtoaly notontosain'ny  fikambanana amerikana tsy mitady tombontsoa antsoina hoe Conservation International ary tahaka ny manao “ankisitrika anaty vatoharana madio” isika.
Anisan'ny nalefa tao amin'ny Fetibe Lions Iraisampirenena ho amin'ny Famoronana tao Cannes ny “Valen's Reef” na “Vatoharan'i Valen”. Navoaka niaraka tamin'ny fiarahana miasa amin'ny YouTube izany.
Manana nosy sy vatoharana mihoatra ny 2500 ny faritr'i Loham-Borona [Bird’s Head]. Fitoeran'ny karazana akoran-dranomasina 600 sy karazan-trondro 1.765 izy (anisan'izany ny karazana antsantsa sy karazana fay mihoatra ny 40). Hita ao amin'io faritra io ny eo ho eo amin'ny 3 isanjaton'ny alan-konko maneran-tany. Manombana ny mpahay siansa fa manana karazan-trondro betsaka kokoa noho ny Sakam-Batoharana Lehibe [Great Barrier Reef] ao Aostralia i Loham-Borona [Bird’s Head] ary manana karazana haran-dranomasina betsaka noho ny Riakan'i Karaiba iray manontolo.
Mamatsy sakafo, fialofana, ary manohana ny fiveloman'ireo Papoaziana Tandrefana miisa 760.000 i Loham-Borona [Bird’s Head]. Any amin'ny faritra atsinanan'i Indonezia no misy an'i Papua Andrefana.
Mihoatra noho ny horonantsary izay mampiseho ny harenan-dranomasin'i Loham-Borona [Bird’s Head] ny “Vatoharan'i Valen”. Mitantara ny fomba nandrahonan'ny jono mandravarava ny zavaboahary an-dranomasina ihany koa ilay izy ary velona indray noho ny ezaka niombonan'ny vondrom-piarahamonina sy ireo mpiaro ny tontolo iainana. Tantarain'ny mpanjono ao an-toerana ny horonantsary izay nanolon-tena ny hiaro ny ranomasina hitsinjovany ny zananilahy, Valen.
Jereo ny lahatsary  feno eto ambany ary misitriha ao anaty rano mangaraharan'i Loham-Borona [Bird’s Head] :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/25/84515/